5 Email Optimization Matipi Ekuwedzera Anovhura uye Kudzvanya | Martech Zone
5 Email Kugonesa Matipi ekuwedzera Kuvhura uye Kubaya
Chipiri, February 3, 2015 Chitatu, Kukadzi 4, 2015 Douglas Karr
Izvo hazvisi kuwana zvakapusa pane iyi infographic kubva kuContentLEAD. Tarisiro inoputirwa neemail nekuda kwemutengo wakaderera pamutungamiri uye yakakwira kutendeuka mwero. Asi izvo zvinoratidzira dambudziko hombe… yako email inorasika muinbox pakati pemazana kana zviuru zvemamwe maPush ekushambadzira mameseji.
Chii chaunogona kuita kusiyanisa yako email kutaurirana kubva kuvanhu? Heano zvinhu zvishanu mukati meatomia yeemail meseji pamwe nekukanganisa uko kugona kunogona kuve nako:
Inobudirira nyaya mitsara inogona kutungamirira 20% yakakwira yakavhurika mitengo paavhareji.
Kwayedza Kukwazisa inogona kutungamirira 129% yakakwira tinya-kuburikidza nemitengo.
Asiri-Corporate Taura inogona kutungamirira 24% mamwe mabhatani.
Wedzera Mifananidzo nokuti 82% yakawedzera kutarisisa.
Yakapatsanurwa mameseji uye vateereri zvinotungamira kune 50% mamwe mabhatani.
Nekuti macampaign eemail anoshanda kwazvo, angangoita marangi ese anoashandisa. Tarisiro 'mabhokisi emabhokisi akazara nemaemail kubva kumakambani uye vatengi vako vanofanirwa kugadzirisa iwo akakosha mameseji kubva kune spam. Iyi infographic inokupa iwe kutarisa nekukurumidza kune iyo anatomi yeanobudirira email meseji kuti iwe ugone kuunza yakabudirira miitiro kune izvo zvemukati zvaunogovana nevateereri vako. ZvemukatiLEAD
Tags: corporate tauraemail tinya kuburikidza rateemail tinya-thru chiyeroemail kudzvanyaemail mifananidzoemail yakazaruka mweroemail inovhuraemail optimizationemail chidimbuemail nyaya mitsarakutaura kwevanhukwaziso dzemunhu
10 Kuvandudza Kwaunogona Kuita Kwekushambadzira Kwemagariro Nhasi!